Puntland oo boqolaal katirsan ciidamadeeda u dirtay magaalo xeebeedka Qandala si ay ula dagaalamaan maleeshiyada taageersan ISIS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo boqolaal katirsan ciidamadeeda u dirtay magaalo xeebeedka Qandala si ay ula dagaalamaan maleeshiyada taageersan ISIS
November 1, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa boqolaal ciidamadeeda ah u dirtay magaalo xeebeedka Qandala kadib markii halkaas ay soo galeen asbuucii lasoo dhaafay maleeshiyaad taageersan ISIS, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal katirsan ciidamada amaanka Puntland oo ka gaabsaday magaciisa ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in dowlada ay ciidamo badan u dirtay magaalo xeebeedka.
“Boqolaal katirsan ciidamada qalabka sida ee Puntand ayaa loo diray magaalo xeebeedka Qandala si ay halkaas howlgalo ugu qaadaan ka dhan ah maleeshiyada Cabdiqaadir Muumin oo asbuucii hore la wareegtay magaalada,” ayuu yiri sargaalka.
Asbuucii lasoo dhaafay, in ka badan 50 dagaalyahan oo taageersan ISIS uuna hoggaaminayo sargaal hore oo Al-Shabaab ah Cabdiqaadir Muumin ayaa qabsaday magaalo xeebeedka Qandala ee kutaala gobolka Bari, balse markii dambe ayay isaga baxeen.
Dadka deegaanka ayaa Puntland Mirror u sheegay in ay arkeen diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh kuwaasoo dul maraya deegaanada u dhow Qandala, balse ma jirto wax weerar duqayn ah oo ilaa hadda lasoo wariyay.
In ka badan 400 dadka deegaanka magaalada Qandala ah ayaa ka cararay guryahoodii iyagoo ka cabsi qaba dagaal cusub oo dhexmara ciidamada dowladda Puntland iyo maleeshiyada taageersan ISIS.